अमेरीकाबाट पर्किएका बब्बु थापा ‘याद आउँछ बेसरी’बाट कम्ब्याक (भिडियो सहित)
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली लोक संगीतले निकै फड्को मा रेको छ । वास्तवमा नेपालीको गीत संगीत नै लोक गीत हो । आजको दिनसम्म लोक संगीतमा कुनै पनि पुर्णविराम लागेको
निक्कै प्रतिक्षा गरिएको चलचित्र “छ’क्का प’न्जा २” भर्खरै युटुबमा सार्बजनिक हेर्नुस् ….भिडियो सहित
काठमान्डौ । युट्युबमा निकै प्रतिक्षा गरिएको चलचित्र छ’क्का प’न्जा सार्बजनिक भएको छ । हाइलाइट्स नेपाल को युटुब बाट फिल्म सार्बजनिक गरिएको हो । आमा सरस्वती मुभिजको ब्यानरमा निर्मित चलचित्र ‘छ’क्का प’न्जा
आजको मुन्द्रेको कमेडी क्लबको ४७औं एपिसोडमा गायिका इन्दिरा जोशी! हेर्नुहोस् भिडियो
काठमाडौं । नेपाली हास्य व्यङ्ग्य बिधामा स्थापित नाम हो जितु नेपाल, उनै जितु “मुन्द्रेको कमेडी क्लब“ कार्यक्रम मार्फत दर्शकमाझ आएका छन् । इन्टरटेन्मेन्टको “मुन्द्रेको कमेडी क्लब“ कार्यक्रम मार्फत जिनु नेपाल
बल्छी-राजुको प्रस्तुति “हल्का रमाइलो” को तेस्रो एपिसोड यस्तो छ ! हेर्नुहोस् भिडियो
काठमाण्डौ । मिडिया हबको प्रस्तुति रहेको हाँस्य टेलिश्रृंखला ‘हल्का रमाइलो’ प्रत्येक हप्ताको आइतबार प्रसारण हुने गर्दछ भने बल्छी-ध्रुबे अफिसियल युट्युब च्यानल मार्फत आउने गर्दछ । सोम धिताल उत्पादन सल्लाहकार तथा
काठमाडौं, असोज ५ । एक समय थियो, केकी अधिकारीलाई फिल्मको ओइरो लागेर छान्नै मुस्किल पथ्र्यो। तर, उनका फिल्मले बक्स अफिसमा गतिलो प्रदर्शन गर्न सकेनन्। एउटै शैलीको पात्र र अभिनयमा मग्न भएको
एजेन्सी । सन् २००८ मा बलिउडमा रब ने बना दी जोडीबाट डेब्यु गरेकी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा फच्र्यून इन्डियाको २०१९ को शीर्ष ५० सबैभन्दा शक्तिशाली महिलाको सूचीमा समावेश भएकी छिन् ।
काठमाण्डौ । कबड्डी कबड्डी’ को तेस्रो सिक्वेल चलचित्र ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ हिजो शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आएको छ । प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ ले पहिलो दिनमा सर्वाधिक कमाइ गर्ने नेपाली फिल्मको
काठमाडौं । अन्तराष्ट्रिय गायन रियालिटी सो ‘द भ्वाइस अफ नेपाल सिजन–२’ को प्रसारण सुरु भएको छ । हिमालय टीभी एचडीमा प्रशारण भइरहेको ‘दि भ्वाइस अफ नेपाल सिजन २’ हरेक शुक्रबार
नेपाली मौलिक गीतहरु क्रमशः लोप हुँदै जाने क्रममा छन् । नेपाली संगीतमा नयाँ नयाँ प्रयोगहरु भित्रिने क्रमले गर्दा पुराना र मौलिक लय तथा धुनहरु दुर्लभ बन्दैछन् । तर तिनको मिठास
काठमाडौं । सिङगिङ रियालिटी शो ‘नेपाल लोकस्टार’ एपीवान एचडी टेलिभिजनबाट प्रशारण भईरहेको छ । ३० वटा श्रृंखला प्रशारण हुने कार्यक्रम एपीवान एचडी टेलिभिजनबाट प्रशारण हुनेछ । ३१ औं श्रृखंला फाइनल